अर्बपतिकी श्रीमती अपरिचित केटासँग डेटमा गएपछि….. – Jagaran Nepal
अर्बपतिकी श्रीमती अपरिचित केटासँग डेटमा गएपछि…..
Jagaran Nepal मंगलबार, चैत्र २२, २०७८
अर्बपति व्यापारीकी श्रीमतीले आफ्ना एक फ्यानलाई डेटमा लगेकी छन् । बदलामा व्यापारीकी श्रीमतीले अज्ञात व्यक्तिबाट करिब साढे दुई लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । यसको पछाडि श्रीमतीले नै कारण बताएकी छिन् ।
मोडल मारिसोल योटाले २०२१ मा जर्मन अर्बपति व्यापारी बास्टियन योटासँग विवाह गरेकी थिइन् । मोडल मारिसोल इन्स्टाग्राममा निकै सक्रिय छिन् । उनका करिब ५ लाख फलोअर्स छन् ।
मारिसोलले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो श्रीमानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बताइन् । दुबैले पहिलो महिनामा कसको फ्यान धेरै छन् र कसले सामाजिक सञ्जालबाट बढी कमाउँछन् हेरौं भन्ने निर्णय गरेका छन्। यसपछि मोडलले फ्यानबाट २.५ लाख भारु लिएर उनीसँग डेटमा गएकी थिइन् ।
को हुन् अर्बपति व्यापारी बास्टियन योटा ?
बास्टियन योट्टा धेरै विलासी जीवन बिताउनको लागि प्रसिद्ध छ। बास्टियन योट्टाको कम्पनीले तौल घटाउन माइन्डस्लिमिङ मेसिन सहित धेरै प्रकारका मेसिनहरू निर्माण गर्छ। उनको योट्टा लाइफ नामको इन्स्टाग्राममा खाता छ जहाँ उनले आफ्ना उत्कृष्ट फोटोहरू पोस्ट गर्छन्।
जर्मनीमा रहँदा बास्टियनलाई आफ्नो ग्लैमरस जीवनका कारण समस्या हुन थाल्यो, त्यसपछि उनी अमेरिका गए । उनले भनेका थिए कि जर्मनीका मानिसहरू उनीसँग ईर्ष्यालु थिए र उनको जीवनशैलीमा प्रश्न उठाइरहेका थिए।
बास्टियन योटाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि मानिसहरू छुट्टीमा जान्छन्, तर तिनीहरूसँग छुट्टी हुन्छ, किनभने हरेक दिन तिनीहरूका लागि छुट्टी हो। एक बेलुका ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ कि १५ लाख खर्च हुन्छ भन्ने वास्ता नगर्ने उनले बताए ।
विमानभित्रै चार पटक ह’स्तमै’थु’न गरेपछि……
नाकको छेउमा कोठी हुने व्यक्ति रहस्यमय, अरू ठाँउमा हुने कस्ता ?
इमरान खानकी पूर्वपत्नीले गरिन् खुलासा, ‘उनको त्यो नै छैन, नभए म उनीसँगै हुने थिएँ’
पतिसँग सुतिरहेकि थिइन् एक्कासी कसैले उनको शरीर चलाए जस्तो लाग्यो श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा महिलाको होस उड्यो !